Ogaden News Agency (ONA) – Ben Bella – Abaalmarintii Farasiiska waxay noqotay Xasuuqii Qalma iyo Sadiif
Ben Bella – Abaalmarintii Farasiiska waxay noqotay Xasuuqii Qalma iyo Sadiif
Posted by ONA Admin	/ May 19, 2013
Taariikhda shucuubta caalamka iyo halganada ay soo mareen waxaa laga korosadaa cibro iyo aqoon. Waxaad ku garanaysaa ahmiyadda Taariikhda sida Quraanka Eebe uu Ilaahay ugaga qisooday umadihii hore iyo cidhibtoodii iyadoo Ilaahay uu ku soo gabagabaynayo – Ku Cibrad Qaata Kuwiina Caqliga Lahow (Factabiroo Yaa Ulil Albaab).
Dalka Algeria wuxuu qabsaday Fransiiska 1830. Afartan sano gudahood (1830 – 1872) waxaa ku dhintay dagaaladii iyo cuduro ay u keeneen 3ex dalool shacabka Algeriya. Laga bilaabo 1840 wuxuu Faransiiska u yaqiinay Algeriya dal Farasiis ah oon sinaba uga madaxbanaanaan karin. Waxaan ku soo qulqulay oo qabsaday dhulkii beeraha ahaa boqolaal kun oo Faransiis ah.
Axmad Ben Bella oo noqday M/weynihii ugu horeeyay ee dalkaa ayaa wareysi dheer oo taxana ah oo Al-Jazeera ay la yeelatay intuusan dhimanin (Alalaha u naxariistee) uu kaga sheekeeyay halgankii ay soo mareen iyo siduu ku bilowday halgankooda iyo marxaladaha ay ka soo gudbeen. Qofkii garanaya Afka carabiga (inakstoo uu ku hadlayo lahjadda Carabta Magrib) waxaa wanaagsan inuu daawado wareysiga Ben Bella.
Axmad Ben Bella wuxuu ka mid noqday ciidanka Faransiiska dagaalkii 2aad ee Aduunka. Wuxuu sheegay in ciidanka Faransiiska uu ku dagaalamayay ay ahaayeen 90% ree Magribi (Morokaan iyo Aljeeriyaan). Waxaa dagaaladii uu lagalay Nazi-gii Jarmalka isagoo ka mid ah ciidanka farasiiska oo Sargaal xigeen ah lagu gudoonsiiyay bilad sharaf Geesinimo midii ugu qiimiga badnayd oo De Gaulle uu u xidhay. Waxaan taliye u ahaa buu yidhi ciidan soo majeestayaal ah oo loogu talagalay inay dhintaan ama qabsadaan. Weerarkii ugu horeeyay oo mir ahaa waxaan ahayn 180 askari. 25 ayaan nolol ku soo noqonay intii kale way ku dhinteen. Wuxuu sheegay Axmad Ben Bella ciidanka dhab ahaan u xoreeyay Farasa inay ahaayeen Carab. Saraakiisha ayaa ahaa Farasiis, laakiin 90% ciidanka uu ku dagaalamayay Farasiiska Dagaalkii 2aad waxay ahaayeen Carab. Dagaalkii 2aad ee aduunka markuu dhamaaday oo Faransa la xoreeyay, waxay isla 8dii May 1945 ku xasuuqeen ciidankii Farassiiska 2ba magaalo oo lakala yidhaahdo Qalma iyo Sadiif 45,000 oo reer Algeriya ah. Xasuuqa ka dhacay Qalma iyo Sadiif wuxuu badalay buu yidhi marinkii taariikhda dalka Algeriya. Ujeeadada Farasiiska waxay salka ku haysay dhaqan gumaysi oo caan ah. In hanka laga jabiyo shacabka la gumaysto oo marnaba aanay u mana sheeganin kuwa gumaysanaya. Maadaama ay dagaalkii ku guulaysteen oo xoreeyeen Faransa ciidankii tirada badnaa ee ka koobnaa Algeerya iyo Marooko, hadafka 1aad ee Farasiiska wuxuu noqday in shacabka Algeriya aanay isla weynaanin si aanay isula simin Faransiiska dhaladka ah inkastoo ay lahaayeen waxaad tihiin dad Faransiis ah.
Wuxuu sheegay Ben Bella inuu xauuqaasi indhaha u furay oo waxaa laga guulaystay kuwii aaminsanaa in doorasho iyo looltan xisbiyeed xuquuqda shacabka Algeriya lagu raadiyo. Ka dib wuxuu sasaasay urur siri ah oo weerarkii ugu horeeyay ku qaaday Boostada magaalada Wahraan halkaasoo ay lacagtii farabadan oo taalay ku dheceen. Lacagtaa ayay kaga gateen dalka Libiya hub. Muddo ka dib waa la qabtay Ben Bella waxaana lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah. Habka loo qabtay ayuu ka sheekeyay isagoo yidhi waxaa nugu dhex jiray mid khaa’in ah oo hoosta kala shaqeeya sirdoonka Faransiiska, kaasoo sheegay meeshii aan noolaa oo ahayd xaafadda Farassiiska halkaasoo aanay iga filaynin. Muddo ka dib xabsigaa oo ah mid aad loo ilaaliyo ayuu isaga iyo saaxiibkii noqdeen kuwii ugu horeeyay ee abid ka baxsada xabsigaa. Wuxuu aadayaa qudha dalkii Faransiiska ee laga raadinay, muddo ka dibna wuxuu uga sii gudbayaa Swizerland ka dibna Masar halkaasoo uu kula kulmay Jamal Cabdinaasir. Waa sheeko taariikhi ah oo xiisa lehe, qofkii garanaya afka Carabiga halkan hakala socodo qaybaha taxanahaa.
Qaybtii 2aad ee taxanahaa halkan ka daawo: